Asa vaventy :: Tsy voaloa ny volan’ny orinasa maro mitentina an’arivony tapitrisa ariary • AoRaha
Asa vaventy Tsy voaloa ny volan’ny orinasa maro mitentina an’arivony tapitrisa ariary
Mampikapeo ireo orinasa marobe tsy nahazo ny tambin’ny asa vaventy nataony tamin’ny taona 2018 sy ny voalohan’ny taona 2019. Vola an-jato tapitrisany maro no tsy voaloan’ny ministeran’ny Asa vaventy. Miantso ny mpitondra fanjakana izy ireo, noho izany, satria efa halohalika ny ranom-bary.
“Tsy fantatray mazava izay tena anton’ity tsy nandovana ny volanay ireo. Niova ho Tahirim-bola ho an’ny lalana mantsy ny Tahirim-bola fikojakojana ny lalana teo aloha, ka tsy fantatra na noho izany no mahatonga ny olana ara-
pitantanana. Na izany aza, miantso ny fitondram-panjakana izahay hamaha ity olanay ity haingana fa am- bivitra ny ain’ireo fianakaviana an’arivony tompon’ ireo vola. Tsy misy hivelomana satria nisy ireo very asa. Ny mpandraharaha tsy afaka manodina ny orinasany satria mihitsoka ny renivola tokony hampiasaina”, hoy ny fitantaran’ireo mpandraharaha manana olana.
Nanontaniana momba ity tranga ity ny tompon’ andraikitra tao amin’ny minisiteran’ny Asa vaventy saingy nilaza ho tsy manana horesahina aloha. “Ny mpiasa tamin’ireo orinasa tsy voaloa ny karama. Ny mpamatsy entana ihany koa manenjika satria tsy voaloa ny volan’izy ireo tamin’ny fanatanterahana ny asa”, hoy ny fitarainan’ireo mpandraharaha.
Fanambin’ny mpilalao teatra :: Hisy fampisehoana tantara an-tsehatra isam-bolana etsy Andavamamba
Fifandirana nahafaty :: Novonoin’ilay rangahy tamin’ny hazo ny vadiny